Ụlọ ọrụ fọdụ ụgbọ ala, ndị na -ebubata ya - ndị na -emepụta China oche oche oche oche
Onye na -enye ihe mkpuchi oche oche ụgbọ ala dị ọcha site na ụlọ ọrụ China
Mkpuchi oche ụgbọ ala bụ akụkụ dị mkpa karịa n'ime ime ụgbọ ala, mkpuchi oche oche dị mma ga -eme ka enwee obi ụtọ onye nwe ya n'oge usoro ịnya ụgbọ ala. Ọ bụrụ na ịchọrọ, biko mee ka anyị mara ihe nlereanya ahụ, anyị ga -enyekwa gị nkọwa ndị ọzọ.
Ọkụ na -ere ọkụ zuru oke Ụdị mkpọchi oche ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ nwere ụgbọ ala
Nhazi ụdị nke dabara n'usoro ahụ mmadụ nke oche ụgbọ ala nwere ike belata ike ọgwụgwụ nke ịkwọ ụgbọala kpatara.
Ihe mkpuchi oche oche oche oche mkpuchi mkpuchi oche oche ụgbọ ala
Dịka otu akụkụ dị mkpa nke ime ụgbọ ala, oche ụgbọ ala nwere ọrụ dị mkpa na mmetụta nke ime ụgbọ ala.
Ngwa ngwa ime ụlọ na -adigide
Site na ngwakọta agba ọhụrụ na ụdị dị iche iche, oche ụgbọ ala Bensen nwere ike gboo ọtụtụ mkpa gị.
Ihe mkpuchi ụgbọ ala nke ime ụlọ
Ihe mkpuchi ụgbọ ala Bensen na -eji akpụkpọ anụ PU na -ahụ maka gburugburu ebe obibi, yana akwa akwa linen owu na -akawanye njọ nke Europe, ịmịkọrọ mmiri na iku ume, oge ihu igwe anọ na -adị mgbe niile, na -eme ka ị nwekwuo obi ụtọ mgbe ị na -anya ụgbọ ala.
Ezi ogo ahaziri ọrịre kacha mma na -adịgide adịgide oche maka akpaaka
Ihe mkpuchi ụgbọ ala Bensen na -eketa usoro akpụkpọ anụ ejiri aka mee, jikọtara ya na ụdị ejiji ọmarịcha ọgbara ọhụrụ iji gosipụta ụdị njiri mara nke ọma.
Okomoko oche oche okomoko nwere ọnụ ahịa asọmpi
Ọkpụrụkpụ nke kwushin oche dị naanị 1.8mm, dabara nke ọma na oche mbụ, dị nro na ntụsara ahụ, adịghị mfe ngbanwe. Ojiji zuru ụwa ọnụ maka ọtụtụ ụdị ụgbọ ala.
Ngwa ụgbọ ala na -achọ ụgbọ ala ịchọ mma zuru ụwa ọnụ
Akpụkpọ anụ ala gbachapụrụ agbachapụ na nke mebiri emebi, nke na-akwalite ume iku ume nke akpụkpọ anụ ahụ, mmiri igbapu mmiri na ikuku ikuku, mgbochi na mgbochi na-eguzogide, wee nweta ikuku ikuku ụgbọ ala mbụ, kpo oku na ọrụ ndị ọzọ.
Agba dị iche iche Akpụkpọ anụ na -echebe oche oche akpụkpọ anụ
Ihe mkpuchi ụgbọ ala Bensen site na iji usoro ịcha mma ọdịnala, na-egosi ọmarịcha ụlọ elu mara mma nwere akụkụ atọ, nwere agba itoolu nwere ụdị ejiji, ịdị mfe na ịdị n'otu.
Ezi mma ụgbọ ala oche fom emepụta
Ihe mkpuchi oche ụgbọ ala bụ ngwa ahịa ndị nwe ụgbọ ala. Họrọ ntụsara ahụ ụgbọ ala dị mma, nke bara uru dịka oge si dị, ọ dị mkpa. Ugbu a enwere akpụkpọ anụ, akpụkpọ anụ na -enweghị atụ, akpụkpọ anụ, nylon, eriri kemịkalụ, ajị anụ, ajị polyester na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke mkpuchi oche ụgbọ ala.